Ciidamada Dowladda iyo Al shabaab oo ku dagaalamay duleedka dagmada Marko – Somali Top News
Al shabaab oo Lix ruux u toogtay falal basaasnimo ah
Amnesty International: Zero accountability as civilian deaths mount from US air strikes in Somalia
Kolonyo uu la socday taliska ciidanka xoogga dalka oo lagu qarxiyay Janaale
Ciidamada Dowladda iyo Al shabaab oo ku dagaalamay duleedka dagmada Marko
September 22, 2019 Somali Top News	0 Comments
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Somalia iyo xoogag taabacsan Al-Shabaab ayaa xalay ku dagaalamay degaanka Ceel-Saliini oo ku yaalla duleedka degmada Marko ee gobolka Sh/hoose.
Dagaalka ayaa bilowday kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar culus oo ku bilowday qaraxyo ku soo qaadeen Saldhig Ciidamada Dowladdu ku leeyihiin degaanka Ceel-Saliini, iyadoo la sheegay in halkaasi uu ka dhacay dagaal labada dhinac ay fooda isku dareen.
Qaar ka mid ah dadka degaanka ayaa ku waramay inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac oo mar kaliya isqabsatay, iyagoo intaa ku daray iney la soo deristay cabsi iyo aragagax.
Ciidamada dowladda & Al-Shabaab ayaa la sheegay inuu dagaalka ka soo gaaray khasaare sidoo kalena ay jiraan waxyeelo soo gaartay dad shacab ah oo ku sugnaa meel u dhow saldhiga la weeraray.
Al-Shabaab oo ka hadlay dagaalkaas ayaa waxay ay sheegeen inay la wareegeen gacan ku heynta deegaanka Ceel-Saliini balse saraakiisha ciidamada dowlada ayaa beeniyey warkaas, iyagoo sheegay iney iska caabiyeen weerarkaas, ayna khasaare xoog leh gaarsiiyeen kooxihii soo weeraray.
Xaalada degaanka Ceel-saliini ayaa saaka degan ka dib dagaalkii xalay, iyadoo ciidamada Dowladda ay degaanka ka wadaan dhaqdhaqaaq ciidan sida ay sheegayaan Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya degaankaas.
← Heshiisyo waa weyn oo dhexmari doona Soomaaliya iyo Ruushka
Somali president to attend UN assembly for 1st time →
Madaxweynaha Jubbaland oo kala shiray Golahiisa wasiirada xiriirka dowladda Federalka
September 26, 2019 Somali Top News 0
Madaxweynaha Puntland oo u duulaya Kismaayo
October 9, 2019 Somali Top News 0
Dab xoog leh oo ka kacay Suuqa Bakaaraha
April 30, 2019 Somali Top News 0